အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မျှော်လင့် ......... နေတုန်းပါ .... အမေ
မျှော်လင့် ......... နေတုန်းပါ .... အမေ
မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း အရည်အသွေးကောင်းကို ......
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဆီမှာ ... ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ်..။
မြန်မာ့ ပတ္တမြား ... အရည်အသွေးကောင်းကို .......
မြန်မာ့ ကျွန်းသစ်အရည်သွေးကောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ ...... ပရိဘောဂကို .......
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဆီက ....... ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ် .........။
မြန်မာ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ....... လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ .
မြန်မာ့ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကထုတ်တဲ့ ..လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ..အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဆီကနေ ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ်..။
မြန်မာ့ ကြေးနီနဲ့ထုတ်တဲ့ စစ်လက်နက်ကို ... အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဆီက ...... ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ်..။
မြန်မာ့ နီကယ်နဲ့ထုတ်တဲ့ ... စက်ပစ္စည်းတွေကို .......
မြန်မာ့ ပုလဲကို ......
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဆီက ......... ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ်...။
မြန်မာ့ ရေပိုင်နက်က ရတဲ့ငါးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ... ငါးသေတ္တာကို .....
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးကနေ ........ ပြန်ဝယ်ရတဲ့ခေတ်.....။
မြန်မာ့ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ရဲအဖွဲ့ဝင်တွေက..
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးနဲ့ ............ လူကုန်ကူးနေကြတဲ့ခေတ်..။
၈၈ လည်း ....
ငွေရတု တိုင်ခဲ့ပြီ ...။
ပေးဆပ်ခြင်းလည်း ... များခဲ့ကြပြီ..။
သယံဇာတ အကုန် ......ကုန်ပြီ...။
ဘ၀တွေလည်း ........... နာပြီ....။
မျှော်လင့် ......... နေတုန်းပါ .... အမေ..။
Cartoon ဟန်လေး၏ ကာတွန်းအား ...........
ငရဲသား .........ထပ် ...... ကလိ သည်..။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:59 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook